တရုတ်နိုင်ငံတွင်စမတ်နည်းပညာသုံး အမှိုက်သိမ်းစနစ်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန်ဆောင်ရွက် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံတွင်စမတ်နည်းပညာသုံး အမှိုက်သိမ်းစနစ်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန်ဆောင်ရွက်
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် စံချိန်တင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဒုတိယ အမြင့်ဆုံး အရေးပေါ် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်
၁၁ ထပ် ရှိသည့် အဆောက်အဦအား အချိန် ၂၈ နာရီဖြင့်အပြီးတည်ဆောက်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံး မော်တော်ယာဉ်များတီထွင်ထုတ်လုပ်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး တစ်နာရီလျှင် ၆၀၀ ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်မည့်သံလိုက်ရထားမိတ်ဆက်
အတွင်းမွန်ဂို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် မီးသတ်ဝန်ထမ်းများ ကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲကျင်းပ
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများပေါ် သောက်ရေရရှိရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ထားသနည်း
ကျောက်မီးသွေးတွင်းနေရာအထက်၌ ရေပေါ် တည်ဆောက်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်စက်ရုံ
ကွေ့ကျိုး၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ကွေ့ကျိုးပြည်နယ် Bijiang ခရိုင်၊ Tongren မြို့ တွင် အိမ်သုံး အမှိုက်စွန့်ပစ် ထားသိုရေး စနစ်အား စမတ်နည်းပညာဖြင့် တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ထားရှိသည်။ ထိုစနစ်သည် ခရိုင်အတွင်းရှိ အမှိုက်စွန့်ပစ်ကန်များနှင့် အမှိုက်သိမ်းယာဉ်များအား စောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။
မှိုက်ကန်များတွင် ဆင်ဆာများတပ်ဆင်ထားရှိပြီး အပူချိန်၊ ထားသိုနိုင်မည့်ပမာဏ၊အမှိုက်များ၏ အလေးချိန်စသည်တို့ကို စစ်ဆေးပေးသည်။ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများက အမှိုက်များ၏ အချက်အလက်များအား မိုဘိုင်းဖုန်း အပလီကေးရှင်းများမှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးနိုင်သည်။ အမှိုက်များအား လိုက်လံသိမ်းဆည်းပြီးနောက် ဘေးကင်းသောနည်းလမ်းအဖြစ် အိမ်သုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်များအား စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံသို့ပို့ဆောင်ပြီး မီးရှို့ကာ စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd မှ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ Yang Jing က “ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက Bijiang ခရိုင်၊ Tongren မြို့ မှာ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် အိမ်သုံးစွန့်ပစ်အမှိုက်စုဆောင်းရေး နှင့် လွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အမှိုက်လွှဲပြောင်းရေးစက်ရုံပေါင်း ၁၇ ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အသိဉာဏ်နည်းပညာထည့်သွင်းထားတဲ့ အမှိုက်စုဆောင်းရေးနေရာပေါင်း ၁,၀၅၆ ခု နှင့် အမှိုက်စုဆောင်းလွှဲပြောင်းရေးယာဉ်ပေါင်း ၉၂ စင်းနဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပါတယ်။ ခရိုင်အတွင်းရှိ လမ်းပေါင်း ၇ လမ်း၊မြို့နယ် ၈ ခုနှင့် ကျေးရွာပေါင်း ၈၀၈ ရွာကို ကျွန်တော်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းကျအဆင့်မီ စွာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများ ၊ သန့်ရှင်းရေးယာဉ်များ နှင့် အခြား ကဏ္ဍများအား အသိဉာဏ်နည်းပညာဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အသိဉာဏ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ သန့်ရှင်းရေး Cloud ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီစနစ်ဟာ ကျေးလက်ဒေသမှာ အမှိုက်စုဆောင်းပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပိုမို ထင်သာမြင်သာရှိစေပြီး အသိဉာဏ်နည်းပညာက ကျေးလက်ဒေသများမှာ အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ်ထိရောက်ကောင်းမွန်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ သန့်ရှင်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Lu Shangjun က “ ကျွန်တော်တို့ စမတ်နည်းပညာသုံးစနစ်များဖြင့် မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် အိမ်သုံးအမှိုက်တွေကို စုဆောင်းသိမ်းဆည်းကတည်းက သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေက ကောင်းမွန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ လေထုရဲ့ အရည်အသွေးကိုသန့်စင်စေမှာဖြစ်တာကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကောင်းကောင်းလျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဂေဟဗေဒ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးရွာတွေဟာအခုဆိုရင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေပါပြီ၊ ကျေးလက်ဒေသဟာ တဖန်ပြန်လည်သက်ဝင်လို့နေပြီပေါ့ဗျာ” ဟုဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Smart waste collection system in SW China improves sanitation conditions
TONGREN, July 14, 2021 (Xinhua) — An urban and rural household waste collection and transfer system has been put into use in Tongren, China’s Guizhou. Find out how the system improves sanitation conditions in an intelligent and efficient manner.
တရုတ်နိုင်ငံရှိ FAW မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ်က အစီးရေ ၈ သန်းမြောက် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်
ရေအောက်တွင် ထိုက်ချိချွမ် လေ့ကျင့်ခန်း လေ့ကျင့်ရိုက်ကူး